Indoda yeScorpio kunye neLibra yabasetyhini ukuhambelana kwexesha elide - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana Indoda yeScorpio kunye neLibra yabasetyhini ukuhambelana kwexesha elide
Indoda yeScorpio kunye neLibra yabasetyhini ukuhambelana kwexesha elide
Indoda yaseScorpio kunye nomfazi waseLibra banokuba sisibini esifanelekileyo, kuba uyahlawula amandla akhe. Ukutsala amandla, eli nenekazi liya kuthanda ukuba indoda yalo yeScorpio ifuna ukulawula yonke into.
Ngelixa iya kuba yindoda ye-alpha, iya kuba yinkosikazi enesimilo emi ecaleni kwakhe ngamaxesha amnandi nabi. Kuhle ukuba uyathandana, kuba kunokuba nzima kakhulu kuye ukuba enze abahlobo abatsha.
Iikhrayitheriya IScorpio Man Libra yabasetyhini isiDanga sokuNgqinelana
Indoda yeScorpio iya kuhlala iqonda ngobomi bomfazi waseLibra onamahla ndinyuka. Ngelixa bobabini beya kuthi balumke malunga nokwazana ngcono kwasekuqaleni, kungekudala baya kukulibala konke malunga nokungazithembi kwaye baya kuqala ukuba nomdla kubuntu babo.
Usenokusebenzisa wonke umtsalane nokuguquguquka kwakhe, kodwa ayizukusebenza naye. Nangona kunjalo, unokuzama ukumxhaphaza, naye, kuphela uya kuba ngumsusi. Ukuba amaqhinga akhe awabambi, akazukuvuma ukuba woyisiwe. Ukwalelwa kuyenzakalisa indoda yeScorpio.
Icala elimnyama lomntu wepisces
Xa umfazi waseLibra engakhathalele nto ithile, akukho nto anokuyenza umntu. Uya kuba nomtsalane kuye, uya kuphantse azive ebuthathaka kwaye engonwabanga. Ayisiyondoda eya kufuna nayo uthando. Ngalo mfo, uya kuba nomnqweno wesini somzimba ngakumbi.
Uyakucinga kwangoko ukuba kuqhubeka ntoni engqondweni yakhe. Ngelixa engathandani kwaye evulekileyo njengaye, uya kuba nakho ukumkhuthaza ngengqondo, ke uyayonwabela imihla yabo.
Akunandaba nokuba baya kuba ngabahlobo, abantakwabo okanye abathandi, aba babini baya kuba nobudlelwane obugcwele ukufudumala. Konke oku kuya kubenza balibale malunga nokutshintsha kwemood okanye ukungaqondani.
Indoda yaseScorpio izolile kwaye yamkele inyani yokuba umfazi wayo waseLibra akanazigqibo. Uya kumlinda afumane ubuchule kunye kunye nokwenza izigqibo.
Ufana nokumelwa okwenyani komtsalane nobabalo. Le ntombazana inokubamba ingqalelo yomntu wonke, yiyo loo nto eya kuba nabantu abaninzi abathandayo. Ufuna uxolo nemvisiswano ngaphezu kwayo nayiphi na into. Ukuba ukhe wacinezela okanye uzama ukumphatha, uya kubaleka.
Eli libhinqa elithanda ukunconywa. Uxabisa kuphela abantu abamncoma ngokunyanisekileyo. Indoda yamaphupha ayo iyazikhathalela kwaye iyathandeka ngokulinganayo. Kodwa, ngaphezu kwayo nayiphi na enye into, ufuna umhlobo. Akakwazi ukuthandana ukuba akangomhlobo nomntu wakhe.
I-chemistry phakathi komfazi waseLibra kunye nendoda yeScorpio ayinakuphikwa. Kodwa oku akunamsebenzi ukuba bazokulwa nini, njengoko bengabalinganiswa abohluke kakhulu.
I-Libras ziyakuthanda ukuphuma kwinkampani yosapho kunye nabahlobo. IiScorpios zichasene ngqo: zifuna ukuchitha ixesha elininzi ngaphakathi.
Umfazi waseLibra akaboni nto iphosakeleyo ngokuziphatha ngothando. IScorpio sinesidima kakhulu. Ixesha elininzi alichitha ekunye nabanye, kokukhona uya kuba nomona ngakumbi.
Indoda yeScorpio ayilulo kwaphela uhlobo lokutshintsha ngenxa yobudlelwane bayo. Ke, kule meko, ngumfazi waseLibra ofuna ukulawula indlela aziphethe ngayo.
inyanga ekutsaleni indoda gemini
Kuya kufuneka azivumele ukuba alawulwe nguye. Ngelixa yena eyithiyile ingxabano ngaphezu kwayo nayiphi na enye into, uya kukwazi ukumtyhalela kwimida yakhe.
Unxibelelwano lwabo luya kuhlala lomelele, kodwa baya kuba nokungavumelani. Ngenxa yokuba unamandla kwaye unqabile, aba babini baya kuba neengxaki kubudlelwane babo.
Akayi kukholelwa ukuba unyanisekile okanye ukuba nethemba lakhe liyanceda, kwaye uya kwenzakaliswa sesi simo sengqondo. Ngaphezu koko, indoda yeScorpio inokuba ndlongondlongo xa ingafumani ndlela yayo.
Unxibelelwano kwindoda yaseScorpio indoda yaseLibra isibini sikarmic. Banethuba elihle lokutshata, kuba balungelane kakhulu. Ulwalamano lwabo luya kuhlala luqina, kwaye baya kuqondana ngcono kunaye nabani na ongomnye.
Unomusa kwaye uyathandeka. Ukuzola nokunyaniseka kwakhe kuya kumenza athandane naye. Okukhona ebonisa ukuthembeka nokuzinikela kuye, kokukhona eya kumncoma kwaye amhlonele. Uya kuba lapho kuye nokuba liphi na ixesha okanye imeko. Uya kuba yinkosazana echithwayo kwaye iyanconywa.
Wonke umzuzu aba babini baya kwabelana ngawo uya kuba ukhethekileyo. Xa indoda yeScorpio kunye nomfazi weLibra bekunye, unokuqiniseka ngeebhondi ezinzulu.
Banembeko kwaye bencoma omnye komnye, abayi kuba ngabathandi abalungileyo, kodwa baya kuba ngabahlobo abasenyongweni. Lilonke, njengendoda nomfazi, baya konwaba kakhulu.
leo indoda virgo umfazi ulwa
IiScorpios zijolise kakhulu ekufundiseni abantwana bazo ngokufanelekileyo. Ukuba bakhetha ukuba ngamaqabane eshishini, bobabini ngabenzi bemali abalungileyo.
Ukuba iLibra idinwe kakhulu, iScorpio iza kungena le ngxaki. Ngenxa yokuba bobabini bayasebenza kwaye banomdla, ngekhe badikwe kwinkampani yomnye nomnye. Njengoko bobabini bekholelwa kuthando kunye nokunyaniseka, baya kuba nolwalamano olusekwe kwiimvakalelo eziyinyani kunye neenjongo ezifanayo.
Ixesha elingakumbi bekunye, kokukhona baya kuba nakho ukuqonda omnye komnye. Uya kufunda ukuba ajongane njani nesimo sakhe sokulawula, ngelixa yena eya kumfundisa ukuba angangxami kangakanani.
Ingcebiso yokugqibela ngeNdoda yeScorpio kunye noMfazi waseLibra
Indoda yeScorpio luphawu oluMiselweyo lwamanzi, umfazi waseLibra uyikhadinali yomoya omnye. Oku kuthetha ukuba bahlukile. Kodwa ekuhambeni kwexesha, baya kufunda ukuba bajongane njani nokungafani kwabo kwaye babe sisibini esonwabileyo.
Unokwanelisa eyona minqweno yakhe inomdla, kodwa ukuba uyakhula enomsindo okanye unenkani kakhulu, uyakukhathazeka kakhulu. Kungenzeka ukuba ubudlelwane babo buya kuphazamiseka kakhulu ukuba iLibra ingabandakanyeki kwakhona. Kucetyiswa ukuba uyathamba ukuba ufuna ukuba naye ekuhambeni kwexesha.
Ukulawula umsindo kuya kwamkeleka ngakumbi. Kunokuba nzima ukuba nomsindo ngeLibra, kunjalo. Olu luphawu olulawulwa nguVenus, iplanethi yothando nobuhle, singasathethi ke ngophawu lwayo zizikali, ezingumqondiso wobulungisa.
Ukuba uyamphulaphula rhoqo, unokuqonda ukuba ulungile amaxesha amaninzi. Kwimeko apho engalunganga, nangona kunjalo, kufuneka amcebise ngokuzolileyo nangengqiqo. Ukuba nomsindo akunakuphucula nantoni na.
Unokuchitha imali eninzi kwizinto ezigqithisileyo. Ke, kucetyiswa ukuba nguye oza kubahoya ngemali yabo.
Unokwenza notshintsho kolu lwalamano. Umzekelo, kufuneka angaze athandane namanye amadoda. Unezinto kakhulu kwaye unomona wokungayihoyi into enjalo. Ungayichazanga indoda yaseScorpio inokuba yinto engakhuselekanga ngamanye amaxesha, ke kufuneka iqinisekise ukuba iyathandwa.
Ayinamsebenzi nokuba uxakeke kangakanani ezinye izinto, kufuneka amnike lonke ingqalelo yakhe. Nantoni na yokugxotha ukukrokrela kwakhe iya kwamkeleka.
Leo umhlaza womfazi umfazi ohambelana ngokwesondo
Kukho into malunga nokugqithileyo kubudlelwane phakathi kwezi zimbini. Ukuba baya kuphila njengabantu abatshatileyo, balindele ukuba bafumane ikhefu elincinci.
Ukuba indoda yeScorpio yeyona ifuna ingqalelo yomfazi waseLibra, kuya kufuneka ayimamele yonke into ayithethayo. Eli nenekazi liyathanda ukwamkelwa kwaye lithandwe zizo zonke izangqa zentlalo.
Kuya kufuneka avule ngakumbi. Le ntombazana iyathanda xa umntu ebuza umbono wakhe. Ke, ukumcela ukuba ajoyine iprojekthi yomsebenzi kuya kuba kuhle, kwaye uya konwaba ngakumbi ukunceda.
Ukuba inguye ofuna ingqalelo yakhe, kufuneka abe nenkxaso kakhulu. Uyathanda ukwabelana ngeenjongo zakhe kwaye uya kuhlala ebuyela emntwini ommamelayo.
Umfazi waseLibra othandweni: Ngaba uyalingana?
Indoda yeScorpio enezinye iimpawu
Umfazi waseLibra nezinye iimpawu
I-Pisces-Aries Cusp Woman ezinikezelweyo: Ubuntu bakhe abutyhilwanga
Nge-4 kaJanuwari iZodiac yiCapricorn-Ubuntu obuGcweleyo beHoroscope
ungayixela njani ukuba indoda eyi-aries inomdla kuwe
Amadoda e-gemini kunye ne-taurus yomfazi